Umdlalo we-Craps: 3-4-5 Ixesha lexesha
by UBill Burton
I-Casino ingaba yindawo eyoyikisayo kunye neemidlalo ezinikezwa ukudideka, kodwa ngaba uyazi ukuba ibhetri engcono kakhulu kwitafile ye-craps ayinayo indlu? Ngaba uyayazi ukuba ayibonwanga naphi na kwindawo? Ilungile lo nto! Akukho nto ikhankanywe "ngeengxaki" naphi na etafileni! Kufuneka ube nePhethi yokuPhepha okanye Ungadluli ibheji ukuze uthathe imingcipheko, kodwa uhlala wedwa. Ukuba uyazi malunga neemeko, ezinkulu.
Ukuba awunjalo, uya kulahleka ibhetri engcono kwi-casino.
Ukuba uyayazi indlela yokudlala i-craps , uyazi ukuba i-shooter entsha kufuneka ibeke i-Wager kwi-Pass Line okanye i-Do not Pass Line. Emva kokuba le ngongoma entsha ye-4, 5, 6, 8, 9 okanye 10 yenziwe, iyakwazi ukuqhubeka idubula. Iingxaki zokubheja, ezine-ZERO indlu, akuvumelekanga. Yiyo ibhetti yokukhetha.
I-Pass Line ihlala ihlawula ngisho-imali, kodwa ubuhle bokwenene bentengo yesigqithiso kukuba uhlawulelwa iinjongo eziqinileyo zeengongoma! Ukuze wenze i-wager, vele ufake iichips emva kwebhanki yakho yangaphambili ye-Pass Line kwi-craps layout. Le mboleko ingenziwa ubuncinane ngokulinganayo nokubheja kwePass Line, ngoko ke ukuba unayo imali yokuqala ye-$ 10, faka enye i-$ 10 emva kwayo, ukuba uthabathe. Isixa esithile omele ugqithise kuyo kuxhomekeke kwinqanaba lenombolo.
Ukuba iphuzu li-4, 5, 9 okanye 10, lifanise ukubheja kwakho. Ukuba le ngongoma i-6 okanye i-8, bathabathe i-$ 6 kwiingxaki kwii-5 zamaRandi ezi-5 onayo kwi-Pass Line.
Xa ibhulobho yenza iphuzu layo, uya kufumana umvuzo omkhulu.
Ukuba inqaku li-4 okanye 10 uhlawulelwa 2 ukuya ku-1 kwi-Odds wager yakho
Ukuba inqaku li-5 okanye-9 uhlawulwa 3 ukuya kwe-2 kwi-Odds wager yakho
Ukuba inqaku li-6 okanye-8 uhlawulelwa 6 kuya ku-5 kwi-Odds wager yakho
Uninzi lwe-casinos likuvumela ukuba uthathe iimbali eziphindwe kabini kuwe.
Oku kuthetha ukuba ubeka i-$ 5 kwinqanaba lokupasa, uya kuvunyelwa ukwenza iingxaki zokubheja kwe-$ 10.
Ukubheja kwakho kwinqanaba lokubheja linomda we-1.41 wepesenti. Iingxaki zokubheja azikho ndawo, ngenxa yoko ngokuzithatha, unciphisa umgca wendlu kwiinqwelo zakho zonke. Umgca wokupasa umgca kunye neengxaki ezingafaniyo unomda we-0.85 wepesenti kunye neengxaki eziphindwe kabini, umgca wendlu uhla ukuya kuma-0.61 ekhulwini.
Ngaphezulu kweminyaka embalwa edlulileyo, amaninzi amakhasino aye avumela abadlali ukuba bathathe amabhethri amakhulu. Ezinye i-casino zikhuphisana ngokwenene ukuze zibone ukuba ngubani onokunikela ngeendlela eziphezulu, ukuya kumaxesha angama-100. Nangona oku kuzwakala kukhulu, akunakwenzeka kubadlali abaqhelekileyo ukuba bajonge oku ngaphandle kokuba banabhanki enkulu kakhulu.
3-4-5 Ixesha lexesha
Ukuze wenze izinto zikhawuleze kwaye zilula kumntu wonke, kubadlali ukuya kubathengi kwiBhokisi amadoda, amaninzi amakhasino afake i-system encinci ye-odds apho ivumela kuphela iziganeko ze-3, 4 kunye ne-5 ngamaxesha oMgca wokuDlula. Ngalolu hlobo, abadlali bayavunyelwa ukuthatha izihlandlo ezintathu, ezine okanye ezihlanu, ngokuxhomekeke kwinombolo yendawo. Kwaye, unokufumana ukungavumelani kwi-Come Bets kwakhona!
Ukuba inqaku li-4 okanye 10 ungathatha amaxesha amathathu
Ukuba inqaku li-5 okanye 9 ungathatha amaxesha amane.
Ukuba inqaku li-6 okanye-8 ungathatha amaxesha angama-5.
Iikhredithi zeBlacks Bets
Izibizo ze-$ 5 yePed Line Bet
Point Iziganeko Zamaxesha-Izwe Ingxaki yakho yokubheja kwiNzuzo yakho:
4 okanye 10 Izihlandlo ezi-3 zihlawula 2 ukuya ku-1 $ 15 $ 30
5 okanye 9 Izihlandlo ezi-4 zihlawula 3 ukuya kwe-2 $ 20 $ 30
6 okanye 8 Izihlandlo ezi-5 zihlawula 6 ukuya ku-5 $ 25 $ 30
Uluphi Umoya Weempembelelo?
Inyama kunye nePower Out
Yintoni i-Juxtaposition kwi-Art?
Isigama saseDu Métro - isiTranshini isiGama IsiGama